ခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဏ်ကတ်ကို လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ ?? - Business Plus Travel
လမ်းခရီးတစ်ခုမှာ အဆိုးရွားဆုံးပြဿနာကတော့ ဘဏ်ကတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေပါပဲ။ ဘဏ်ကတ်ကျပျောက်တာ ၊ ခိုးယူခံရတာ စတာတွေပေါ့။ ဘယ်သူမှတော့ ဒီပြဿနာတွေနဲ့ မကြုံချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း မတော်တဆဆိုတာ ရှိတတ်စမြဲပါ ။ ဒီတော့ ဘဏ်ကတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ခရီးလမ်းမှာ ပြဿနာမဖြစ်ရအောင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1. လိုသလောက်ပဲ ယူပါ
ကိုယ့်မှာ ဘဏ်ကတ်တွေ အများအပြားရှိနေပေမယ့်လည်း လမ်းခရီးမှာ ကိုယ်သုံးဖို့ လိုတဲ့ Credit Card, debit Card ကတ် တွေကို ပဲ ယူပါ ။ အပိုကတ်တွေအများကြီးယူမသွားပါနဲ့။ ကိုယ့်မှာ ပါလာတဲ့ ကတ်တွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ဘဏ်ကတ်ထည့်တဲ့ နေရာမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်သိမ်းထားပါ။ အလွယ်တကူ ပြီးစလွယ် အိတ်ထဲကို ထိုးမထည့်လိုက်ပါနဲ့။ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကတ်တွေထဲက ငွေကြေးကို သေချာစစ်ဆေးပါ ။
သင်ဟာ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဝယ်ယူမယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် ၊ စတိုးဆိုင် နေရာတစ်ခုခုမှာ ငွေရှင်းမယ်ဆိုရင် ငွေသားဖြင့်သာ ဘေလ်ပေးချေခြင်းက အန္တရာယ်အကင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Debit Card Fraud လို့ခေါ်တဲ့ မသမာတဲ့နည်းတွေနဲ့ Debit Card ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူခြင်းဖြစ်ရပ်တွေ မကြာခဏပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
3. ကတ်ပျောက်ဆုံးသွားရင် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ
ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့် မတော်တဆ ဘဏ်ကတ်တွေမတော်တဆ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်တွေထံကို လှမ်းအကြောင်းကြားပါ။ ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ စိတ်အေးအေးထားဖို့ပါ ။ ပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကို အကြောင်းကြားပါ။ သူတို့ဘက်ကနေ သင့်ကိုအရေးပေါ်သုံးငွေတစ်ရပ်စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ကတ်ကို တစ်ခြားသူသုံးလို့မရအောင် ပိတ်ပစ်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကတ်အသစ်အစားထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
4. လုံခြုံသော Password ဖြစ်ပါစေ
ATM စက်တွေနဲ့ တခြားသော Password အသုံးပြုရတဲ့ နေရာတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Password ကို သတိထားပြီး ထည့်ပါ။ Password ရိုက်တဲ့အခါ နှိုးနှိုးကြားကြားရှိပါစေ။ ဘတ်ကတ်ရဲ့ PIN Code ကို ကတ်ပေါ်မှာ မှတ်ထားတတ်သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဂဏန်းတွေကို မှတ်သားရတာ အားနည်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တောင် လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာ ရေးမှတ်ထားပါ ။ ဥပမာ ကိုယ့်ဖုန်းထဲက Notebook ထဲမှာတို့ ၊ စာရွက်မှာ ရေးပြီး ပိုက်ဆံအိတ်မှာ ကပ်ထားတာမျိုးတို့ပေါ့။
5. ATM စက် အသုံးပြုတဲ့အခါ
ကိုယ့်ရဲ့ ATM ကတ်ကို စက်ထဲမထိုးထည့်ခင်မှာ ကတ်ထည့်ရမယ့်နေရာကို သေချာစစ်ဆေးပါ ။ ပုံစံယိုယွင်းနေတာတွေ ၊ ထိခိုက်ပွန်းပွဲနေတာမျိုးတွေ ၊ ကတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ချောင်နေတာမျိုးတွေ ၊ စတဲ့ မသင်္ကာစရာမျိုးတွေ ကြုံရတဲ့အခါ
ဒါဟာ ATM Card Skimming တွေရဲ့ သင်္ကတတွေပါပဲ။ ATM Card Skimmer တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကတ်ကို ထည့်ပြီး PIN ကုတ်ကို ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့သည် PIN Code ကိုခိုးယူမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ကိုယ့်ရဲ့ ATM Card ဟာ စက်ထဲမှာ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေလို့ တော်တော်နဲ့ ထွက်မလာတာမျိုးပါ။ အဲ့သည်အခါမှာ မသမာသူတွေဟာ တာဝန်ရှိသူပုံစံနဲ့ ကိုယ့်အနားကို ရောက်လာပြီး Password ကို နောက်တစ်ကြိမ်ရိုက်ခိုင်းမယ် ။ ပြီးရင် ဘယ်လိုမှ မရတော့ဘဲ လက်လျော့ပြီး ဘဏ်ကို Complain တက်ဖို့အတွက် ATM ကတ်ကို စက်ထဲမှာ ထားခဲ့တာမျိုးပါ။
တကယ်က သူခိုးတွေဟာ Card ထည့်တဲ့ အပေါက်ထဲကို တိပ်အပါးလေးတွေထည့်ထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ATM Card ကို အထဲမှာ ပိတ်မိအောင်လုပ်ထားတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ သူတို့ရှေ့မှာ PIN Code အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ထားခဲ့တာကြောင့် Password သိသွားတဲ့ သူတို့အတွက်တော့ ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ပါပဲ။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာလေးတွေကတော့ ခရီးသွားတဲ့ အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဏ်ကတ်လေးတွေကို ဘယ်လိုလုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဘဏ်ကတ် ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ဘဏ်ကတ်လေးတွေကို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရီးစဉ်လေးတွေ ဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။